Dala isithwebuli esikhulu se-3D sibonga i-Raspberry Pi | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Izwe lokuphrinta kwe-3D likhula ngokushesha. Noma kunjalo, ukuphrinta kwe-3D kwamanje kusekelwe ekutholeni amamodeli e-3D nokuphrinta kuwo. Ngamanye amagama, awuvami ukudala amamodeli woqobo we-3D. Ngalokhu, abasebenzisi basebenzisa isithwebuli sento. Kepha Kuthiwani uma singenayo isithwebuli sento? Kuthiwani uma sifuna ukuskena into enkulu? senzani?
Umenzi waseBrithani ukwazile ukuthola isisombululo. Lo makhi ushayele UPoppy Mosbacher udale isithwebuli se-3D kubantu babantu. Le gajethi yenzelwe inkampani yakhe, inkampani yemfashini ebidinga ukudala amamodeli we-3D ngokushesha.
UPoppy Mosbacher udale isithwebuli se-3D esebenzisa iHardware Hardware neFree Software. Ngalesi sikhathi akasebenzisanga amabhodi avela kuphrojekthi ye-Arduino kepha usebenzise amabhodi avela ku-Raspberry Pi. Ngokuqondile ngisebenzise i-Raspberry Pi Zero ne-Pi Cam.
Le sethi yamabhodi iphindwe izikhathi ezingama-27, okungukuthi, isithwebuli sisebenzisa amabhodi ama-Raspberry Pi Zero angama-27 nama-PiCams angama-27 asatshalaliswa kuso sonke isakhiwo esikhulu. Lesi sakhiwo esikhulu sakhiwe ngamashubhu amakhadibhodi nezintambo exhuma wonke amabhodi kudivayisi eyodwa esebenza njengeseva. Isoftware esetshenziselwe ukusebenzisa lesi sithwebuli esikhulu se-3D Yenza kabusha ngokuzenzakalela, isoftware ecubungula izithombe ukudala imodeli ye-3D.
Ngenhlanhla lesi sithwebuli esikhulu se-3D singaziphindaphinda futhi sizakhe ngoba umdali uyilayishe ku- Inqolobane efundekayo. Kuleli khosombe sithola umhlahlandlela wezinto, umhlahlandlela wokwakha nayo yonke isoftware edingekayo ukuze wonke amabhodi wePi Zero asebenze. Amabhodi wePi Zero ajwayele ukuba nedumela lokuba namandla aphansi futhi angaba njalo, kepha alusizo impela, okungenani kumsebenzisi wokugcina Awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Bakha isithwebuli esikhulu se-3D sibonga i-Raspberry Pi
Senze isithwebuli se-3D esinamakhamera ayi-108.